मेसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूटका चित्रहरू
by मारिसा बेंजामिन र केटी ड्योल
एमआईटी क्याम्पसमा फोटो टूर
Killian Court र महान गुंबद मा एमआईटी। andymw91 / Flickr / CC BY-SA 2.0
मेसाचुसेट्स टेक्नोलॉजीको टेक्नोलोजी, एमआईटीको रूपमा पनि चिनिन्छ, क्याम्ब्रिज, मेसाचुसेट्समा एक निजी अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो। 1861 मा स्थापित, एमआईटी वर्तमान मा लगभग 10,000 छात्र नामांकन छ, स्नातक स्तर मा उनको आधे देखि अधिक। यसको स्कूल रंग कार्डिनर रातो र इस्पात खैरो हो, र यसको नक्कल टिम बियर हो।
विश्वविद्यालय 30 देखि अधिक विभागहरु संग पाँच विद्यालयहरु मा आयोजित छ: वास्तुकला र योजना को स्कूल; ईन्जिनियरिङ् स्कूल मानविकी, कला र सामाजिक विज्ञान स्कूल विज्ञानको स्कूल; र स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमैंट।
एमआईटी लगातार विश्वको शीर्ष प्रविधि विद्यालयहरु मध्ये एक को रूप मा स्थानित छ र यो लगातार उच्च ईन्जिनियरिङ् स्कूलहरु को बीच अत्यधिक रैंक गर्दछ । प्रसिद्ध छात्रमा नोम Chomsky, बज Aldrin र कोफी इन्नन शामिल छ। कम प्रसिद्ध अल्पसंख्यक एलन ग्रोव को कलेज प्रवेश विशेषज्ञ शामिल छ।
यो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा के प्राप्त गर्न हेर्न यो हेर्न, एमआईटी प्रोफाईल र यो एमआईटी जीपीए, एसट र एक्ट ग्राफ हेर्नुहोस् ।
एमआईटीको रे र मारिया स्टेटा सेन्टर
एमआईटी स्टेटा सेन्टर (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
मेसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी मा रे र मारिया स्टेटा सेन्टर 2004 मा कब्जे को लागि खोलियो, र यस पछि देखि उनको उत्कृष्ट डिजाइन को कारण एक परिसर होमार्क बन्यो।
प्रसिद्ध आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहेरी द्वारा डिज़ाइन गरिएको छ, स्टेटा सेन्टरले दुई महत्वपूर्ण एमआईटी अकादमीहरु को कार्यालय पनि घर बनाएको छ: रॉन रिविस्ट, एक प्रसिद्ध क्रिस्पीरर र नोम चम्कीसी, एक दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक जो न्यूयर्क टाइम्स "लाभांशिक आधुनिक भाषाका पिता" भनिन्छ। स्टेटा सेन्टरमा दुवै दर्शन र भाषाई विभागहरू छन्।
स्टेटा सेन्टरको सेलिब्रिटी स्टेटमको बावजूद, यो विभिन्न प्रकारका विश्वविद्यालयको आवश्यकता पनि कार्य गर्दछ। पारिस्थितिकी अनुकूल इमारत डिजाइन क्रस साइन्सल र कृत्रिम खुफिया प्रयोगशाला र सूचना प्रणाली र साथसाथै क्लासरूम, एक ठूलो सभागि, एकाउन्ट विद्यार्थी ह्याङ्गआउट स्थानहरू, फिटनेस सेन्टर, र खाना खाने सुविधाहरू सहित क्रस अनुशासनिक अनुसन्धान रिक्त स्थानहरू समायोजन गर्दछ। ।
एमआईटीमा फोर्ब्स परिवार कैफे
फोर्ब्स परिवार कैफे एमआईटीमा (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
फोर्ब्स परिवार कैफे एमआईटी को रे र मारिया स्टेटा सेन्टर भित्र स्थित छ। उज्ज्वल-लिङ्क, 220-सीट क्याफेले शनिवारमा भोजनको सेवा गर्दछ, 7:30 मा खुल्ला हुन्छ मेनु स्यान्डविच, सलाद, सूप, पिज्जा, पास्ता, गर्म इन्ट्री, सुशी र अन-जाने नाश्ता समावेश गर्दछ। त्यहाँ एक Starbucks कफी खडा पनि छ।
क्याफे केवल स्टेटा सेन्टरमा मात्र भोजन विकल्प छैन। चौथो फ्लोरमा, आर एन्ड डी पबले विद्यार्थीहरूको लागि बियर, वाइन, सफ्ट पेय, चाय र कफी प्रदान गर्दछ। 21+ हो। पट्टीमा एपटिजाइजर मेनु पनि पब किरा, जसमा nachos, quesadillas, चिप्स र डुबाइ, र व्यक्तिगत पिज्जा समावेश गर्दछ।
एमआईटीमा स्टेटा लक्चर हॉल
स्टेटा व्याख्यान हल (फोटो बढाउन क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
रे र मारिया स्टेटा सेन्टरको शिक्षण केन्द्रको पहिलो मंजिलमा यस व्याख्यान कक्षले स्टेटा सेन्टरको कक्षा कोठामा मात्र छ। त्यहाँ दुई तहखाने कक्षा र दुई फ्लैट क्लासरूम पनि छन्।
Stata Center मा अधिकांश शिक्षण सुविधाहरु एमआईटी को उच्च श्रेणी निर्धारण स्कूल को ईन्जिनियरिङ् द्वारा प्रयोग गरिन्छ। केमिकल ईन्जिनियरिङ्, विद्युत ईन्जिनियरिङ् र मेकेनिकल ईन्जिनियरिङ् एमआईटी मा सबै भन्दा लोकप्रिय कम्पनीहरु मा छन्।
एमआईटीको हरियो भवन
एमआईटीमा ग्रीन बिल्डिंग (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
टेक्सास उपकरणको सम्मानमा नामित ग्रीन भवन, सह-संस्थापक र एमआईटी एल्युमिनी सेसिल ग्रीन, घर, वायुमण्डलीय, र ग्रह विज्ञान विज्ञानका लागि घर हो।
इमारत 1962 मा संसारको प्रसिद्ध वास्तुकार आईएम पेई द्वारा डिजाइन गरिएको थियो, जसले पनि एमआईटीको एक युग हो। हरियो भवन कम्ब्रिजमा सबैभन्दा ठूलो भवन हो।
यसको उल्लेखनीय आकार र डिजाइनको कारण, ग्रीन बिल्डिंग धेरै मस्तिष्क र हैकहरूको लक्ष्य भएको छ। 2011 मा, एमआईटी विद्यार्थीले भवनको हरेक सन्झ्यालमा ताररहित रूपमा अनुकूल कस्टम एलईडी रोशनी स्थापना गरे। विद्यार्थीले ग्रीन बिल्डिंगलाई एक ठूलो टेट्रस खेलमा बदलिदिए, जुन बस्टनबाट देखिने थियो।
MIT मा मस्तिष्क र संज्ञानात्मक विज्ञान परिसर
एमआईटीको ब्रेन र संज्ञानात्मक विज्ञान परिसर (फोटो बढाउन क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
स्टेटा सेन्टरमार्फत, मस्तिष्क र संज्ञानात्मक विज्ञान परिसर ब्रेन र संज्ञानात्मक विज्ञान विभागका लागि मुख्यालय हो। 2005 मा पूरा भयो, यस भवन को Auditorium र संगोष्ठी को कोठा, साथ ही शोध प्रयोगशालाओं र एक 90-फीट उच्च आर्यम को सुविधा छ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो न्यूरोसिसर सेन्टरको रूपमा, भवनले धेरै अनुकूलन अनुकूलित विशेषताहरू जस्तै भूरी जल पुनर्नवीनीकरण शौचालय र तूफान जल व्यवस्थापन जस्ता काम गर्दछ।
परिसर मार्टिनोस इमेजिंग सेन्टरको लागि घर हो, म्याक गौतम इन्टरनेसनल ब्रेन रिसर्च, पिकवर इन्स्टीट्युट अफ लर्निंग र मेमोरी, र बिनेजिकल र कम्प्युटिटिकल सिक्नका लागि केन्द्र।
भवन 16 एमआईटी मा कक्षा
एमआईटी कक्षा (फोटो बढाउन क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
यो कक्षा कोठा डोरान्स बिल्डिंगमा स्थित छ, वा भवन निर्माण 16, को रूपमा एमआईटीका भवनहरू सामान्यतया उनीहरूको संख्यात्मक नामहरूद्वारा पठाइन्छ। 16 घरका कार्यालयहरू, कक्षाघर र विद्यार्थी कार्यपालिकाहरू, साथै रूख र बेंचहरूसँग धूप आउटडोर प्लाजा निर्माण गर्दै। भवन 16 मा एमआईटी "हैक," वा शरारतहरूको लक्ष्य पनि रहेको छ।
यो कक्षा कोठामा लगभग 70 विद्यार्थीहरू फिट छन्। एमआईटीमा औसत वर्ग साइजले 30 विद्यार्थीहरूलाई घुमाउनेछ, जबकि केहि संगोष्ठी कक्षाहरू निकै सानो हुनेछ, र अर्को ठूलो, परिचयात्मक व्याख्यान 200 विद्यार्थीहरूको रोस्टर हुनेछ।
एमआईटीमा हेडन मेमोरियल लाइब्रेरी
एमआईटीमा हेडन मेमोरियल लाइब्रेरी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
चार्ल्स हेडन मेमोरियल लाइब्रेरी, 1950 मा मानवअधिकार, कला र सामाजिक विज्ञान को लागि मुख्य मानविकी र विज्ञान पुस्तकालय हो। मेमोरियल ड्राइभको साथ किलिआन कोर्टको लागी स्थित, पुस्तकालयको संग्रह एन्थ्रोपोलोलोजीबाट महिलाहरूको अध्ययनमा पर्दछ।
दोस्रो फ्लोर विज्ञान, प्रविधि र दबाइमा महिलाहरु मा दुनिया मा किताबहरुको सबै भन्दा ठूलो संग्रह मध्ये एक हो।
Maclaurin इमारतहरु मा एमआईटी
Maclaurin इमारतहरु मा एमआईटी (विस्तार गर्न फोटो मा क्लिक गर्नुहोस)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
किलिआन कोर्टको वरिपरि इमारतहरू मेकलिरेन इमारतहरू छन्, जसलाई पूर्व एमआईटी अध्यक्ष रिचर्ड मकलार्यिनको सम्मानमा राखिएको छ। जटिलता भवनहरू 3,4र 10 समावेश गर्दछ। एक यू-आकारको फारममा, ह्याण्डेडको यसको व्यापक सञ्जाल क्याम्ब्रिजको कडा सर्दको मौसमबाट विद्यार्थी र संकाय सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्, स्नातक प्रवेश, र राष्ट्रपति कार्यालय विभाग3मा अवस्थित छ।4घरको संगीत र थियेटर कला, सार्वजनिक सेवा केन्द्र, र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म क्लब निर्माण गर्दै।
ग्रेट डोम, एमआईटीमा वास्तुकलाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित टुक्रा मध्ये एक, निर्माणमा बस्छ 10। ठूलो डोमले किलिआन कोर्टलाई हेर्छ, जहाँ सुरु हुन्छ हरेक वर्ष। भवन 10 प्रवेश कार्यालय, बार्कर लाइब्रेरी र च्यानेलर अफिसको घर हो।
एमआईटीबाट चार्ल्स नदीको दृश्य हेर्नुहोस्
चार्ल्स नदी (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
चार्ल्स नदी सजिलै एमआईटीको क्याम्पसको नजिकै छ। क्याम्ब्रिज, क्यास्ट्रिज र बोस्टन बीच सीमाको रूपमा काम गर्दछ, एमआईटीको चालक दलको टोली पनि हो।
हर्ल्डो डब्ल्यू पियर्स बूथियस 1966 मा बनाइयो र यो परिसरमा उत्कृष्ट एथलेटिक परिसरहरू मध्ये एक माना जाता छ। बूथहाउसले आठ-ओभर हिउँने पानीको इनडोर पङ्क्ति ट्यांकको सुविधा दिन्छ। सुविधामा पनि 64 ergometers र 50 गोलाहरू, आठौं, चौडाई, जोडी र चार वटा डुङ्गामा रहेका छन्।
चार्ल्स रेगाटा को प्रमुख एक अर्का दुई-दिन पङ्क्तिको दौड हो जुन हरेक अक्टोबरमा हुन्छ। दौडले संसारको वरिपरिका केहि उत्तम पंक्तिहरू ल्याउँछ। एमआईटी चालक दलले सक्रिय रूपमा चार्ल्सको टाउकोमा भाग लिन्छन्।
एमआईटीमा मेसी हॉल
एमआईटीमा मेसी हॉल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
मासी हॉल, 305 मेमोरियल ड्राइभ मा, सुन्दर चार्ल्स नदी मा देखिन्छ। पूर्व अशडाउन हाउस नामक, विस्तृत नवीनीकरण र अपग्रेड पछि 2011 मा हल खोलियो। सह-निवास निवासले 462 स्नातकहरुलाई समेट्छ। कक्ष विकल्पहरूमा सिंगल, डबल्स र भ्रमणहरू; तिब्बत सामान्यतया जूनियर र वरिष्ठहरूका लागि आरक्षित छन्। सबै स्नानघर साझा गरिएको छ, र जनावरहरू अनुमति छैन - माछा बाहेक।
मेसी हॉलमा यसको पहिलो मंजिलमा एमआईटीको सबैभन्दा ठूलो भोजन कक्ष पनि छ, हावर्ड डाइनिंग हल। डाइनिंग हॉल कोर्सर, शाकाहारी, भेग र ग्लुटेन मुक्त विकल्प समेत प्रति हप्ता 19वटा भोजन प्रदान गर्दछ।
Kresge Auditorium मा एमआईटी
Kres Aud Auditorium मा एमआईटी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
एमआईटीको विद्यार्थी निकायले ल्याउने प्रयासको रूपमा उल्लेखनीय फिनियन-अमेरिकी आर्किटेक्ट इरोरो सार्टेननले डिजाइन गरे, क्रेज अडिटन्टियमले अक्सर संगीत, व्याख्यान, खेलहरू, कन्फिगरेन्सहरू र अन्य कार्यक्रमहरू मेजबान गर्दछ।
यसको मुख्य-स्तरीय कन्सर्ट हॉल 1,226 दर्शकहरू र एक साना थिएटर तल सीटहरू, सीता 204 को क्रेज लिग थियेटर भनिन्छ।
Kres Aud Auditorium मा कार्यालय, ताल, रिहर्सल कोठा र ड्रेसिङ कोठाहरू पनि समावेश छन्। यसको दृश्यमण्डल स्ट्राइक लॉबी, जुन एक भित्ता पूर्ण रूपमा सन्झ्यालको निर्माण गरिन्छ, कन्फिन्स र अधिवेशनहरूको लागि अलग रहन सकिन्छ।
एमआईटीको हेनरी जी। स्टेनब्रिनर '27 स्टेडियम
एमआईटी स्टेडियम (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
क्रेज एग्गोरिमेमियम र स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्र, हेनरी जी स्टेनबरेनर '27 स्टेडियम मा एमआईटीको फुटबल, फुटबल, लेजर्रोस र ट्र्याक र फील्ड टिमहरूको लागि मुख्य स्थान हो।
मुख्य क्षेत्र, रबर्ट फील्ड, ट्रयाकभित्र अवस्थित छ र भर्खरै स्थापित स्थापित कृत्रिम खेल क्षेत्र हो।
स्टेडियम एमआईटीको एथलेटिक्स कार्यक्रमको लागि एक केन्द्रको रूपमा सेवा गर्दछ, किनभने यो कार इन्डोर टेनिस सुविधाले घेरिएको छ; जॉनसन एथलेटिक्स सेन्टर, जो कि बर्फ रिंक हुन्छ। Zesiger खेल र स्वास्थ्य केन्द्र, जो कसरत सुविधाहरु, व्यक्तिगत प्रशिक्षण र समूह को कक्षाहरु प्रदान गर्दछ; रकवेल क्याज, जो विश्वविद्यालयको बास्केटबल र भलिबल टोलीका लागि स्थान हो। साथ साथै अन्य प्रशिक्षण केन्द्रहरू र व्यायामशालाहरू पनि छन्।
एमआईटीमा स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्र
एमआईटीमा स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्र (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्र परिसरमा अधिक विद्यार्थी गतिविधिको हब हो। यो केन्द्र 1965 मा निर्माण भएको थियो र 11 वें एमआईटी अध्यक्ष, जुलियस स्ट्रटटनको सम्मानमा राखिएको थियो। केन्द्र खुल्ला 24 घण्टा खुला छ।
अधिकतर क्लबहरू र विद्यार्थी संगठन स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्रमा आधारित छन्। एमआईटी कार्ड अफिस, विद्यार्थी क्रियाकलाप अफिस, र पब्लिक सेवा सेन्टर मध्यमा स्थित प्रशासनिक संस्थाहरूमध्ये केही हुन्। त्यहाँ बालबालिकाहरू, सुखा सफाई, र बैंकिङ आवश्यकताहरू प्रदान गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि धेरै सुविधाजनक खुदरा पसलहरू छन्। केन्द्र अन्नाको टेक्वेरिया, क्याम्ब्रिज ग्रिल, र सबवे सहित विभिन्न प्रकारका खाना विकल्प प्रदान गर्दछ।
साथै, स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्रमा सामुदायिक अध्ययन रिक्त स्थान छ। दोस्रो फ्लोरमा, स्ट्रटटन लाउन्ज, वा "एअर एअरपोर्ट" लाउन्जले सिचहरू, डेस्कहरू र टिभिहरू राख्छन्। तेस्रो तल्लामा पढ्ने कोठा, परम्परागत रूपमा शान्त अध्ययन स्थान हो।
Alchemist Statue मा एमआईटी
अल्कोमिस्ट प्रतिमा एमआईटी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
मेस्साचुसेट्स एवेन्यू र स्ट्रटटन विद्यार्थी केन्द्रको बीचमा "अलचेस्ट", एमआईटीको क्याम्पसमा उल्लेखनीय चिन्ह हो र विशेष गरी स्कूलको 150 औं वर्षगायतका लागि परिषद गरिएको थियो। मूर्तिकला ज्यूज प्लान्सेना द्वारा सिर्जना गरिएको, मूर्तिकला संख्याको संख्या र गणितीय प्रतीकहरू मानवको आकारमा चित्रण गर्दछ।
प्लान्साको काम धेरै शोधकर्ताहरू, वैज्ञानिकहरू र गणितज्ञहरूको लागि स्पष्ट समर्पण हो जसले एमआईटीमा अध्ययन गरेका छन्। रात मा, मूर्तिकला विभिन्न बैकलाइट्स द्वारा ज्योति गरिन्छ, संख्याहरु र प्रतीकहरु लाई उजागर गर्दछ।
एमआईटीमा रोजर्स बिल्डिंग
एमआईटीमा रोजर्स बिल्डिंग (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
रोजर्स बिल्डिंग, या "77 बिल्डिंग 7," मा 77 माचुचेट्स एवेन्यू, एमआईटीको क्याम्पस को मुख्य आधार हो। म्यासाचुसेट्स एवेन्यूमा स्थायी दाँत, यसको संगमरमर सीढ़ी न केवल प्रसिद्ध अनंत कुरिडोर को लागी, तर एकाधिक प्रयोगशालाओं, कार्यालयहरु, शैक्षिक विभागहरु, विश्वविद्यालयको आगन्तुक केन्द्र र रोचक पुस्तकालय, एमआईटीको वास्तुकला र योजना पुस्तकालय।
रोजर्स बिल्डिंग मा एक खुदरा भोजन भोजन, साथ ही Bosworth कैफे, स्टीम कैफे पनि शामिल छ, जो Peet को कफी, विशेषता एस्प्रेसो पेय, र पेस्ट्री र डेसर्ट को प्रसिद्ध बोस्टन bakeries द्वारा प्रदान गर्दछ।
एमआईटी बोइसवर्थको क्याफे "एक कफी पिउनेको मनपर्ने छ ... छुटेको छैन।" यो खुल्ला हप्तादिन 7:30 बजे देखि 5:00 बजे सम्म हुन्छ
एमआईटीमा अनंत कोइराला
एमआईटीमा अनंत कोइराला (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
एमआईटीको प्रसिद्ध "अनंत ग्रिड" फैलियो। विभिन्न भवनहरू जोड्दै र पश्चिम र पूर्व जोडेर परिसरको अन्त्यमा भवनहरू 7, 30, 10,4र 8 मार्फत 16 मील।
अनंत कैरिडोरको पर्खाल पोस्टर विज्ञापन विद्यार्थी समूह, गतिविधि र घटनाहरु संग रेखांकित छन्। धेरै प्रयोगशालाहरु अनंत कैरिडोर को लागी आधारित छन्, र उनको फर्श देखि छत को गिलास खिडकियां र दरवाजेहरु एमआईटी रोज मा हुन्छ कि केहि अद्भुत अनुसन्धान मा एक झलक प्रदान गर्छन।
अनंत कोइराला पनि एक प्रसिद्ध एमआईटी परंपरा को मेजबान हो, MITHenge। एक वर्ष धेरै वर्ष, सामान्यतया जनवरीको सुरुमा र नोभेम्बरको अन्त्यमा, सूर्य अनन्त संरेखणको साथमा अनन्त संरेखणमा सेट गर्दछ, हलुवाको सम्पूर्ण लम्बाई रोचक र विद्यार्थीहरू र संकाय एकजनाको चित्रण गर्दछ।
केन्डल स्क्वायरमा ग्यालेक्सी मूर्तिकला
केन्डल स्क्वायरमा ग्यालेक्सी मूर्तिकला (फोटोमा विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रेडिट: केटी ड्योल
1980 देखि, ग्यालेक्सी: पृथ्वी स्केल मूर्तिकला, जो कि डेविस, टेक्नोलोजी-आधारित सम्बद्ध कलाकार र शोधकर्ताको संस्थानले केन्डल स्क्वायर मेट्रो स्टेसनको बाहिर बोस्टनको स्वागत गर्नुभएको छ।
केन्डल रोक्न एमआईटीको क्याम्पस, र केन्डल स्क्वायरका जीवन्त सहरमा सबैभन्दा प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान गर्दछ जुन विभिन्न रेस्टुरेन्ट, क्याफेहरू, बारहरू, पसलहरू, किन्डल स्क्वायर सिनेमा, र एमआईटीको पुस्तक भण्डारको घर हो।
बोस्टनको ब्या बेमा एमआईटीको अल्फा एप्सिलन पे
एमआईटीको अल्फा एप्सिलन पे (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
यद्यपि एमआईटीको क्याम्पस क्याम्ब्रिजमा स्थित छ, स्कूलको सोरोरिटीहरू र बिराटनगरहरूमध्ये अधिकांश बोस्टनको ब्या खा बे पड़ोसमा आधारित हुन्छन्। अल्फा एप्सिलन पिई जस्तै धेरै बिराटनगरमा भर्खरै बिराटनगर, यहाँ थिता चिनियाँ, फिई डेल्टा थेटा र ल्याम्म्पा ची अल्फा बे बे स्टेट रोडमा अवस्थित छन् जुन बोस्टन विश्वविद्यालयको परिसरको पनि भाग हो।
1958 मा, लिम्डा ची अल्फा शरीर को लम्बाई ओवरभर स्टोट मा हार्वर्ड ब्रिज को लंबाई मा मापा, जो "364.4 स्मोट्स + एक कान" को रूप मा फैल्यो। प्रत्येक वर्ष ल्याम्डा ची अल्फाले पुलमा अंकहरू राख्दछ, र आज हार्वर्ड ब्रिज पनि सामान्यतया स्मूट ब्रिजको रुपमा चिनिन्छ।
अन्य बोस्टन एरिया कलेजहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
बोस्टन र क्याम्ब्रिज धेरै अन्य विद्यालयहरूको घर हो। एमआईटीको उत्तर हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो र बोस्टनको चार्ल्स नदी भरमा तपाई बोस्टन विश्वविद्यालय , इमरसन कलेज र उत्तरपश्चिमी विश्वविद्यालय भेट्टाउनुहुनेछ। यसको पनि परिसरको हिसाबले दूरी भित्र ब्रान्डिस यूनिवर्सिटी , टिफट्स विश्वविद्यालय , र वेल्सले कलेज हो । जबकि एमआईटी 10,000 भन्दा कम विद्यार्थी हुन सक्छ, त्यहाँ कम्तीमा 400,000 विद्यार्थीहरू कम्पासको केहि माइल भित्र छन्।
सिकन असक्षमता संग विद्यार्थीहरुको लागि कलेज
कोरुजोन एक्किनोको प्रोफाइल
ठूलो स्केल भिडियो प्रदर्शन - Jumbotron
डोनाल्ड टम्पप को सबै समय को क्रेजिएस्ट उद्धरण
कजर वंश के थियो?
च्याम्पियनको साथ फ्रान्सेली अभिव्यक्ति
1812 को युद्ध: फोर्ट एरी को घेराबन्दी
6 हिन्दू संस्कृत र हिन्दू धर्मको बारे मा आश्चर्यजनक तथ्य
इंडियाना वेस्लेन विश्वविद्यालय जीपीए, एसएट र एक्ट डेटा
कसरी कन्जुगेट "कर्मचारी" (प्रयोग गर्नका लागि)
व्हाले शार्कहरूको बारेमा 10 तथ्यहरू
Ciswoman / असीमित महिला: परिभाषा
दायाँ जीवनशैली: जीवन बिताउने नैतिकता
GUTIERREZ - नाम अर्थ र उत्पत्ति
स्पैनिशमा मितिहरू लेख्दै
कसरी कार वा ट्रक पाङ्ग्राहरू तिरस्कार गर्ने
कसले पेंटबललाई इन्कार गरे?
विलियम लोहा गिरिसन
टाइगर वुड्स चुटकुले
मर्मन अगमवक्ताहरूको प्रमुख पुस्तक
लिस्मो र 'ले' को प्रयोग
एक लिबरल आर्ट्स कलेज के हो?
स्कूलहरु मा व्याख्यान: पेशेवर र विपक्ष
व्यवहार स्व निगरानी जाँचसूचीहरू
तेस्रो श्रेणी क्रिसमस गणित शब्द समस्याहरू
संगीतकारहरूको लागि शीर्ष9व्यायाम
आप्रवास मेडिकल परीक्षाको बारेमा थप जान्नुहोस्